सिंहदरबारको सपनासंगै ओलीको जिन्दगी समाप्तै भयो’ : झाँक्री
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन् । उनले भनिन्,‘अब सिंहदरबारमा खड्गप्रसाद ओलीको प्रवेश त उहाँको जिन्दगीमा समाप्तै भयो । जनादेशलाई कुल्चिएको व्यक्तिलाई फेरि पनि जनताले मौका दिन्छन् भन्ने नै लाग्दैन् । खड्गप्रसाद ओली र उनका ७० करोडदेखि सबै प्रकरणहरु सिंहदरबारमा छिर्नु चाहीँ करिब करिब अब अन्तिम नै हो । अब सम्भव छैन त्यो कुरा ।’ प्रस्तुत छ नेतृ झाँक्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभएको छ रु केपी शर्मा ओलीमय भयो नि देश यतिखेर ?
व्यक्ति पूजा गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धरायशी बनाएको ईतिहास चाहीँ संसारभरि देखेको, सुनेको, पढेको हो । त्यसकारण उही कथामा पनि पढेको, फिल्ममा पनि देखेको जस्तो लाग्छ । यो एक प्रकारको कुम्भमेला हो । यो विचारविहीनहरुको व्यक्ति पूजा हो । अनि, व्यक्तिको शक्ति प्रदर्शन हो । त्यहाँ जम्मा भएका मान्छेहरुले कुनै विचार, विवेकको प्रयोग गरेका छन् जस्तो पनि लाग्दैन् । किनभने अग्ला अग्ला पुत्लाको प्रतिमा ठानेर, त्यसको मुनि होचो कदका मनुष्यरुपी मान्छेहरु नै निच्च हाँसकेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन साँच्चै धराशयी भएको थियो, त्यो दक्षिणपन्थी विसर्जनवादतर्फ गएको थियो र व्यक्तिवाद र अहंकारले त्यसलाई सकेको छ भनेर जुन निश्कर्षसाथ त्यो पार्टीबाट विद्रोह गर्यौं हामीले, त्यो चाहीँ सार्थक नै छ । सही नै छ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ ।
अहिले एमालेका देशभरिका नेता÷कार्यकर्ताले त नेता भनेको त केपी शर्मा ओलीजस्तो भीजन भएको हुनुपर्छ भनेर एक स्वरमा भने नि ?
यस्तो हुन्छ, अन्धविश्वासमा अरु बाँच्ने साहरा भएन, व्यक्ति आफ्नो ढंगले बाँच्ने एउटा अस्तित्व कायम गर्न सकेन भने अलौकिक शक्तिमा विश्वास गरेर मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ । अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एमालेभित्र त्यसको विचार मरेको छ । त्यसको सिद्धान्त, नीति र आदर्श मरेको छ। त्यसले सही कार्यदिशा समात्न नसकेपछि व्यक्ति पूजाको हिसाबले अगाडि बढेको छ । विचार गलत भएपनि व्यक्ति सही छ भने गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्नेखालका कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । ती साँच्चै कार्यकर्ता छन् । कार्यकर्ता पनि दास छन्, ती चाकरहरुको हिसाबले विकसित भैरहेका छन् । त्यसो भएको हुनाले एउटा व्यक्ति शक्तिशाली छ, बनाउन खोजिँदैछ । र, त्यो शक्तिशाली व्यक्ति विचारविहीन, सिद्धान्तविहीन, दक्षिणपन्थको बाटोमा निरन्तर गतिमा अगाडि बढेको छ । त्यस्तो नेतृत्वलाई करेक्शन गर्नुको साटो अझै स्तुतिगान र जयजयगान गर्नु भनेको त्यो आन्दोलनलाई समाप्त गर्नु हो । र, समाप्त हुने बाटोतर्फ छ । हामी त धेरै पहिले नै विद्रोह गरेर सुरक्षित अवतरण गरेछौं भन्ने लाग्छ ।
अब एक महिनापनि नबित्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा जुन संगठन विस्तार भएको छ । त्यसले देखाउँछ कि हामीले कति द्रुत गतिमा पार्टी विस्तार गरेका छौं भन्ने पनि देखाउँछ । पार्टी विस्तार भएन भन्ने कुरा पनि भएन । सरकारमा हामी छिट्टै सहभागी हुदैछौं । तर, सरकारमा सहभागी हुनको लागि हाम्रा लागि केही कानून झन्झटहरु थिए । केही कुरा अप्ठ्यारा थिए । त्यसलाई हामीले अहिले किनारा लगाईसकेका छौं । अब धेरै छिटो यो पनि टुँगो लाग्नेछ । अर्को कुरा, एमाले पार्टी हामी सबैले, मेरो जिन्दगीको पनि धेरै नविनतम र उर्जावान समय पनि त्यही पार्टी निर्माण गर्न मैले पनि खर्च गरें । हामीसँग विद्रोह गरेर आएका सबै सहकर्मी, सिनियर नेताले खर्च गरेर बनाएको पार्टी हो । त्यसकारण स्वभावैले एमालेको सञ्जाल देशव्यापी हुनु पनि स्वभाविक नै हो । त्यति बलियो संगठनको संरचना भएको पार्टीको निरन्तर भत्किने क्रियाकलाप निरन्तर जारी छ । एमाले भत्किदैछ, हामी पूनर्गठित भएर जाँदैछौं । र, यहाँबाट निरन्तर विद्रोह जारी छ । त्यसो भएको भएर आजको दिनसम्म, तपाईँले भनेको ठीक हो, हामी पार्लियामेन्टमा चौथो ठूलो दल हौं । एमाले आजपनि पहिलो शक्तिको रुपमा छ । तर, पहिलो शक्ति दुई तिहाईको नजिक भएर आफ्नो अकर्मण्यताले राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन्, रुपान्तरणको दिशामा लैजान सक्दैन भने त्यो ठूलो शक्ति भएर के हुँदो रहेछ रु दुई तिहाईको सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने, पार्टीलाई सही दिशा दिन नसक्ने, ठूलो भएर पो के भयो त रु अहिले हामीले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम हामीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री खोजेर भईदिनुहोस भन्ने अवस्था भयो । अकर्मण्य, अहंकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र व्यक्तिवादी एउटा दक्षिणपन्थको त्यो नेतृत्वमा जुन पार्टी बन्यो, त्यो पार्टी विघटन हुने प्रक्रिया त आजभन्दा ७ वर्ष पहिले नै सुरु भएको थियो । तर, हामीजस्ता धेरै मान्छे थियौैं, त्यसकारण त्यो थामिएको थियो । अब थामिनेवाला छैन् ।
एमालेले लिएको नीति र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलो पार्टी बनेर फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन् रु
आज मध्यरातिदेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि, आचरण पालना गर्न आयोगको आग्रह